Ngabe amalungu e-UNWTO kufanele abhukishe amathikithi aya eMarrakesh manje? Cha !!!
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba zikaHulumeni » Ngabe amalungu e-UNWTO kufanele abhukishe amathikithi aya eMarrakesh manje? Cha !!!
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • Izindaba Ezintsha • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba Zokuhlangana Komkhakha • Izindaba Ezintsha ZaseMorocco • Izindaba • Spain Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
I-UNWTO kanye nongqongqoshe bezokuvakasha abaqhamuka emazweni angaphezu kwekhulu basezinhlelweni zokuthenga amathikithi okuya eMhlanganweni Jikelele wama-100 weNhlangano Yezokuvakasha Yomhlaba.
Ngokwemininingwane etholwe ngaphakathi ekuphathweni kwe-UNWTO awekho amathikithi angadingeka, ngaphandle kwekhompiyutha enhle ne-inthanethi yokuhambela lo mcimbi.
The Umhlangano Jikelele wama-24 weNhlangano Yezokuvakasha Yomhlaba (UNWTO) kuhlelwe ukuthi kwenzeke kusukela ngoNovemba 30 kuya kuDisemba 3 eMarakesh, eMorocco.
eTurboNews yabikezela ukuhlehliswa kwe-General Assembly ngoJulayi. Ekuqaleni kwalenyanga lesi sibikezelo saba ngokoqobo ngenkathi i-UNWTO yenza izinsuku ezintsha ngokusemthethweni.
Imithombo engenile ngaphakathi kweWorld Tourism Organisation manje isiveza ukuthi kungenzeka kube nohlelo olwehlukile.
Ngisho nabahambi abagonywe ngokuphelele baya eMorocco baxwayiswa ngohulumeni, kufaka phakathi i-United States ukuthi bagweme ukuya eMbusweni waseMorocco ngenxa yokuthambeka kokuhlukahluka kwe-Delta okutheleleka kakhulu kweCoronavirus.
Uhlelo lwezokwelapha eMorocco aluhlomele ukwengeza ukwenyuka okwengeziwe kwamacala e-COVID-19, futhi ukubamba i-General Assembly kuleli Zwe LaseNyakatho Afrika kungaba yizihambeli eziyingozi ezivela emazweni acishe abe yi-160 angafuni ukuzithatha.
Ukulungiselela ngokusemthethweni lo mcimbi obalulekile kusaqhubeka, kepha umthombo onolwazi osendlunkulu ye-UNWTO eMadrid ukhombise ukuthi eTurboNews lokho kulungiselelwa koMhlangano Jikelele wokuqala wokuqala kulungiselelwe ngalesi sikhathi.
Kungalindelwa ukuthi ushintsho olunjalo belungeke lumenyezelwe kuze kube umzuzu wokugcina futhi kungahle kube nesizathu sobugovu esivela kuNobhala-Jikelele we-UNWTO eTurboNews kuyaphenywa njengamanje.
Njengenjwayelo, eTurboNews izamile ukuthola ukuqinisekiswa ngqo kusuka ku-UNWTO.
Ngeshwa, iMenenja Yezokuxhumana ye-UNWTO uMarcelo Risi waba yisisulu senhlangano eqhutshwa ukwesaba, izinsongo, nengcindezi, futhi ukuxhumana ngokukhululeka kuyingxenye yalokho umqondisi wezokuxhumana akuvunyelwe ukukwenza.